Ogaden News Agency (ONA) – Haya’adda ICRC oo Siminaar u Fartay ciidanka Booliska gaarka ah ee federalka Itobiya .
Haya’adda ICRC oo Siminaar u Fartay ciidanka Booliska gaarka ah ee federalka Itobiya .
Sida ay qortay shabakadda haya’adda Caalamiga ee Laanqayrta iyo Bisha Cas (International Commitee of the Red Cross ICRC), 68eed ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska gaarka ah ee federaalka Itoobiya ayaa siminar looga furay Adis Ababa (Riix) ay ku qaadanayeen ilaalinta mabaad’ida asaasiga ah ee Xuquuqul Insaanka marka ay boolisku fulinayaan hawlaha loo xilsaaray.
Michael Dynes, oo hogaaminayay wafdiga ICRC ee siminaarka bixinayay ayaa saxaafadda u sheegay in tababarka uu ku saabsanaa arima muhiim ah oo ka hortag ah. Iyadoo ay doorashooyin ka dhici doonaan dalka Itobiya bishan, ayaa waxaa muhiim ah in booliska la baro mabaad’ida xuquuqda aadanaha taas oo aysan xukuumada iyo ciidamadeedu midna ilaalinin waxaanan rajaynaynaa buu yidhi sarkaalkan, in aanay qalalaasi iyo cabudhin dhicin,sidii klal horeeto dhacday hasa ahaatee loo diyaar garoobo.
Siminaarkan oo ay si wadajir ah usoo qaban qaabiyeen komishinka boolsika fedreraalka Itobiya iyo haya’adda ICRC ayay ku qaateen saraakishan sidii booliska ay si sharci ah ugu adeegsan lahaayeen awoodooda oo aanay ugu xadgudbeen dadka shacabka ah.
Laba-alifle Gebeyehu Asmare oo ka hadlay siminaarka ay qaateen ayaa sheegay inay ku barteen hawsha ay qabtaan sidii loo waafajin lahaa qaanuunka dawliga ah ee booliska, taasoo wax u tareysa hawlaha aan bulshada u qabano oo ah ilaalinta nabadgalyadooda.
Arimaha lagu baranayay siminaarka ayaan ahayn mid loogu talagalay shacabka Somaliyeed ee Ogadenya, iyadoo Liyu booliska halkaa jooga oo dadweynaha u yaqaanaan Hawaarinta, ay Itobiya ugu talagshay inay fuliyaan dambiyo ka dhan ah qaanuunka dawliga oo ah xasuuqa shacabka. Haya’adda ICRC oo 8eed sano ka hor ay Itobiya kasoo saartay Ogadenya kana mamnuucday inay hawl ka qabtaan halkan Riix (Ethiopia Denies ICRC Permission to Resume Ogaden Operation), ayaa kasoo ururisay booliskan ay u fureen siminaarka gobolada kala ah Benishangul-Gumuz, Amhara, Oromia, Tigray, koonfureedka SNNP.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya ayaa xasuuqa iyo gumaadka ka socda Ogadenya warqad cabasho ah uga gudbisay haya’adda ICRC iyo hay,adaha kale ee u dooda xuquuqul insaanka sababta Liyu Boliska ka hawlgala Ogadenya loogu fasaxay inay laayaan shacabka, gana garab dagaalamaan ciidanka Itobiya ama u noqdaan ciidanka Itobiya gabaad ilaaliya xeryahooda.